I-Ribeira dos Caldeirões - Indlu Yepaki Yemvelo - I-Airbnb
I-Ribeira dos Caldeirões - Indlu Yepaki Yemvelo
Nordeste, Azores, i-Portugal
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Leonardo
U-Leonardo Ungumbungazi ovelele
Indawo yokulala yase-Ribeira dos Caldeirões itholakala e-Natural Park kanye nezigayo zayo zamanzi, indawo yasemaphandleni ebukekayo kanye nephoyinti lereferensi ebalulekile esiqhingini sase-São Miguel.
Itholakala enyakatho-mpumalanga yesifunda (esingokwemvelo kunazo zonke esiqhingini), eduze kwendlu kukhona ama-veranda, ungabuka futhi ulalele umsindo wezimpophoma kanye nenkambo yamanzi.
Ungenza ukudla kwangaphandle, ukosa inyama, ujabulele izimpophoma eziningi futhi uvakashele i-Ethnographic Museum, kanye nokuzilolongela imidlalo yokuzilibazisa.
Itholakala enyakatho-mpumalanga yesifunda (imvelo kakhulu yesiqhingi), i-Casa do Moleiro ilungiswa ngokugcwele futhi inekamelo elikhulu lombhede negumbi lokugezela phansi. Esitezi esiphezulu (esinikeza ukufinyelela endlini) yigumbi lokuphumula eline-fireplace nekhishi eligcina uhhavini wokhuni wendabuko.
Izindlu zilungiselelwe ukuhlalisa abantu abadala abangu-4 (ikamelo elilodwa elilala abantu ababili negumbi lokuphumula elinosofa ophinde ube umbhede) futhi okungenani indlwana eyodwa yengane.
Kuzungeze indlu kunama-verandas, nawo wonke amakamelo abheke ipaki lemvelo, lapho ungabuka khona futhi ulalele umsindo wezimpophoma namanzi.
4.56 out of 5 stars from 204 reviews
4.56 · 204 okushiwo abanye
I-College of Natural Park yase-Ribeira dos Caldeirões iyindawo evikelekile yase-Azorean, etholakala eduze kwengxenye yomfula wamanzi, i-Ribeira dos Caldeirões, eNyakatho-mpumalanga yesiqhingi sase-São Miguel.
Leli paki lemvelo litholakala emithambekeni ye-Serra da Tronqueira futhi lithatha ingxenye yenkambo ye-Ribeira do Guilherme, ngasemfuleni lapho futhi itholakala khona i-Botanical Garden yase-Ribeira do Guilherme.
Kuleli paki lemvelo ungabona izinhlobonhlobo zezitshalo zeMacaronesian, lapho i-Laurel ivelele futhi lapho ama-ferns esihlahla emi amakhulu. Futhi kukhona ama-hydrangea amaningi amakhulu kanye nemisedari emikhulu.
Kuyaphawuleka kuleli paki lemvelo eligudla umfula wokuba khona kwempophoma ephakela amanzi alesi siqiwu.
Iqiniso lokuthi emahlathini abo ukuhlangabezana ne-Priolo ehlobene nezinhlobonhlobo zezitshalo kwaholela ekufakweni kwengxenye yepaki endaweni Ekhethekile Yokuvikela ye-Pico da Vara ne-Ribeira do Guilherme.
Kuleli paki kunezigayo ezindala zamanzi, futhi enye yazo iyimnyuziyamu ye-ethnographic. Izindlu zomshini wokugaya zaguqulwa zaba isitolo sezandla kanye nezokuvakasha zasemaphandleni.
Kulesi sikhala kunezinsiza zokudlela, indawo yepikiniki kanye nenkundla yokudlala.
ULeonardo Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 1494/AL
Hlola ezinye izinketho ezise- Nordeste namaphethelo